Mateo 7 NA-TWI - Anyansafo a wofi apuei no - “Mummmu - Bible Gateway
Mateo 7 Nkwa Asem (NA-TWI)
7 “Mummmu ntɛn, na afoforo ammu mo ntɛn. 2 Nea mode yɛ afoforo no, ɛno ara na wɔde bɛyɛ mo. 3 Adɛn na woma ɔbo ketewaa a ɛda wo nua ani so no haw wo, bere a ɔbo kɛse da wo de so? 4 Ɛbɛyɛ dɛn na woatumi aka akyerɛ wo nua se, ‘Ma minyi bosea a ɛda w’ani so no mma wo,’ wɔ bere a, ɔbo kɛse da w’ani so? 5 Onipa huuhuu: Di kan yi ɔbo a ɛda w’ani so no ansa na woatumi ahu wo nua de ayi ama no.